Cir Kaa Dheer Dhul Kaa Dheer waa Caadba Aduun – Rasaasa News
Aug 26, 2009 Jwxo-shiil
Jwxo-shiil, oo ay dad badani ugu afduuban yihiin Eritariya, dadkaas oo badankood yimid dalka Eritariya bilowgii sanadkii 2007, waxay ahaayeen dhalin yaro laga soo uruuriyey Somaliya iyo Xeryaha Qaxootiga ee Kenya, xiligaas oo ay dawlada Eritariya ugu baaqday ururkii dib u xoreynta Somaliya iyo garabka ONLF Jwxo-shiil oo uu xidhiidh adag ka dhaxeeyey in ay u tabobarayso ciidan. Waxaa xiligaasi soo gaadhay dalka Eritariya dad aan ka yarayn 300, oo ruux oo ka soo jeeda dhulka Somalida Ogadeeniya, waxana qaybsaday dadkaas Somali Galbeed iyo Jwxo-shiil, ciidankii Somali Galbeed kolkii ay dhamaysteen tababarka, waxaa lagu soo celiyey meelihii laga qaaday si ay u sii wataan hawlihii loo soo tabobaray, kuwii Jwxo-shiil loo tabobaray badankoodu waxay ku go,doonsan yihiin oo ay wali xero ugu jiraan Jwxo-shiil.
Wararka laga soo sheegayo dalka Eritatiya ee ku saabsan dadkaas ayaa ah kuwo murugo leh. Ciidanka ayaa waxaa loo kala qaybiyey laba qaybood qayb ka soo jeeda Gabalka Dhagaxbuur oo ah gabalka uu ka soo jeedo Jwxo-shiil iyo kuwo ka soo jeeda gabalka Nogob iyo Qoraxeey. Ciidanka ka soo jeeday gabalka dhagaxbuur dhamaantood waxaa lagu soo celiyey dhulka Somalida Ogadeeniya, waana ciidanka ugu ugu badan ee uu Jwxo-shiil ku haysto gudaha Ogadeeniya. Ciidamada ka soo jeeda labada gabal ee kale badankooda waxaa lagaga yimid oo ay joogaan xero ku taal dalka Eriratiya meel u dhaw magaalada casab, halkaas oo ay aad ugu cadaaban yihiin.
Sida ay wararku sheegayaan, xerada maamulkeeda waxaa isaga hooseeya ayaa la yidhi saddex nin oo reer Dhagaxbuur ah, raga meeshaas jooga ayaan wax xidhiidh cidna la lahayn oo ayna ka warhaynin eheladoodii, waxaana ay ku xaraysan yihiin xero xabsi aan waxba dhaamin oo ay ku jiraan ilaa iyo 2007. Sababaha ugu badan ee meeshaas loogu hayo ayaa ah in hadii ay ragaasi dalka ku soo noqadaan ay warbixin ka siin doonaa dadka ay la kulmaan, arimaha foosha xun ee uu Jwxo-shiil ku sameeyey iyo waliba dhibaatooyinka uu halganka u gaystay.
Dhibaatooyinka haysata raga ka soo jeeda gabalada Nogob iyo Qoraxeey ayaa ah ku aad u xun oo ay ka mid yihiin; in ayna ka soo bixi karin xerada ay ku jiraan, in koodii xanuunsada aanu helin dawo, hadii ay dhintaan in lagu dhex xabaalo xerada dhexdeeda, qaar badan oo waalan ayaa xerada iska dhex jooga oo kolka aad la kulanto ku waydiin uun magacyada meelihii ay joogi jireen.
Dadkan oo aan lahaynin tiradooda oo sugan ayaa waxay noogu joogeen dadka warka na soo gaadhsiiyey in ay yihiin 80 nin oo reer Cabdile ah, oo dalka Eritraiya soo gaadhay bilowgii 2007, wixii intaa ka dambaysayna aan istiqyaarkooda ku joogin halkaasi. Xukuumada Eriratiya ayaa waxay u haysataa in ragaasi ay u joogaan arimo tababar, xanuuno iyo dhaawacyo, laakiin runtu waxaa weeye in ay xabsi ugu jiraan Jwxo-shiil, oo isagu ka kaluumaysta Eritariya, tirada dadka aan laga warhaynin ee halkaas ku dhintay ayey tiradoodu kor u dhaafaysaa 60 ruux oo ayna ka warhaynin eheladoodii.
Waxaanu isku dayi doonaa in aanu idiin soo gudbino tirada dhabta ee raga madax furashada uu Jwxo-shiil ugu haysto dalka Eritariya, dadkaas oo dhaamaantood baadiye laga keenay xili ay ku cusbaayeen xeryaha qaxootiga.
Waxaanu ka codsanaynaa dadweynaha Somalida Ogadeeniya in cidii ay wax eheladooda ahi ka aaday Eritariya sababta ay doonto ha u aad in ay hubiyaan sida ay xaaladoodu tahay, waayo hada ayuunbaanu ka war helay in uu Jwxo-shiil dhalinyaro reer Ogadeeniya uu madax furasho ahaan ugu haysto Eritariya.
Sir Baa Wac Tidhi